Tag: xayeysiiska boorarka | Martech Zone
Tag: xayeysiiska boorarka
Jimco, Nofeembar 27, 2020 Jimco, Nofeembar 27, 2020 Douglas Karr
Intii lagu gudajiray aafada, suuqa xayeysiinta ayaa qabsaday. Lafilayo, dabcan, laakiin hoos udhaca 19.1% ee H1 220 ayaa saameyn culus ku leh ganacsiyada. COVID-19 wuxuu dib u qaabeeyey muuqaalka macaamiisha, maadaama ay leedahay dhinacyo badan oo nolol maalmeedka ah. Dadku way safrayaan waxyar iyo kharash yar. Cudurka faafa ayaa la rajeynayaa inuu dhamaan doono bilaha soo socda, laakiin bilahaani waxay sare u qaadeen isbedelada muhiimka ah ee horay uga soo ifbaxayay dunida xayeysiinta. Moobayl
Ma Aniga Ayaa Ah Kan Kaliya Ee Wali Jecel Suuq-abuurka?
Jimco, Juun 2, 2010 Axad, Juun 21, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku kaxeynayay dhinaca Galbeed ee magaalada, waxaan eegay boodh, waxaana ku jiray boorar loogu talagalay qalabka. Halkii boorarku uu noqon lahaa xayeysiis caadi ah, xayaysiintu waxay tagtay dhulka oo dhan. Gacan ayaa kor u kacday boostada qalabkii dhabta ahaana wuxuu ku jiray aagga boorarka. Waxay umuuqatay in cududdii ay dhulka ka soo baxayso. Haddii aan u baahanahay dubbe, waan jeclaan lahaa
Ku darida Mobilada Istaraatiijiyada Xayeysiinta Bannaanka
Arbaco, Juun 15, 2009 Axad, Juun 21, 2015 Adam Yar
Suuqgeynta Mobaylka ayaa soo ifbaxaya waxayna noqoneysaa mid caadi ah maalin kasta. Toddobaadkii hore waxaan booqanayay qoys deggan aagga Myrtle Beach waxaanan arkay boodhadhkan. Waxay ahayd wax aad u wanaagsan in la arko soo jiidasho weyn oo moobaylka ku dhexjirta istiraatiijiyadooda guud ee suuq geynta. Doug wuxuu leeyahay isdhexgal moobil oo lamid ah bartiisa, waxaad uqorinkartaa MartechLOG 71813 waxaadnaheli kartaa digniin markuu wax diro! Waxaan ka jaray koodhka gaaban sawirkan si aan qofna u jirrabin